Zhaoshan Industrial Zone, Huandong Street, Zhuji Guta, Zhejiang Province, China.
ZSM Yakawedzera Serie Embroidery Machine
Yekumhanyisa Quilting Embroidery Machine
Yekumhanyisa Sequin-Nyore Kurekesa-Beads Embroidery Machine
Yekumhanyisa Chenille-Chain Stitch Embroidery Machine
Yekumusoro Flat Embroidery Machine
Laser-Hot Melt Kutema Embroidery Machine
Coiling-Kubata Embroidery Machine
Rhinestone Inopisa Yakagadziriswa Embroidery Machine
Yakakosha Yakagadzirirwa Model Embroidery Machine
kutendeseka, pragmatic, yakakwana, hunyanzvi
kupa mubayiro kuvimba kwevatengi.
Super Multi-misoromuchina wekushongedza
chinomiririra chakakwana che schiffli machira ekushongedza.
tarisa pane kukura
An ISO9001 mhando yakasimbiswa
system inodzorwa kambani.
Yepamberi dhizaini dhizaini
Maitiro akakwana egungano
Maitiro akaomarara ekuongorora
Zhejiang Zhaoshan Electrical Machinery Co, Ltd inogadzira michina yekushongedza yemakomputa, inova yepamusoro tekinoroji kambani yeZhejiang province.By inonamatira manejimendi manejimendi ＂neepamusoro-tekinoroji semusoro, brand inosimudzira budiriro＂, isu takunda ISO9001- 2015, ISO14001-2015 uye CE zvitupa. ＂Zhaoshan＂ muchina wekushongedza michina inozivikanwa neakaderera tambo yakaputsika chiyero, pasi ruzha uye yakanaka embroideries.Michina yedu ine misika yakanaka kuMid-kumabvazuva nyika, India, Pakistan, Maodzanyemba -America nyika, Eastern Europe zvichingodaro.
MaInjiniya & Vashandi
Tichagara tichitevedzera misimboti ye ＂kutendeseka, pragmatic, yakakwana, hunyanzvi＂ yekupa mubayiro kuvimba kwevatengi.
"Kugadziridza kunotora Kudzidzira kweiyo Yakakwirira Chikamu Chekuita"
Zhaoshan brand embroidery michina inozivikanwa neakaderera tambo yakaputsika mwero, pasi ruzha uye akanaka embroideries.
Yekumhanya yakakwira chenille-cheni inoregedza embroidery muchina
Yekumhanyisa sequin-yakapfava ciding-beads embroidery muchina
912 Yakakwira mhanyisa maindasitiri emakomputa embroidery michina
Yekumhanyisa yakakwirira 12 inodzika makomputa embroidery muchina
4 Inaliti yakapetwa ruvara ruviri mabhokisi epurasitiki embroidery muchina
24 Heads kukwirira kwemhanyisa towel makomputa embroidery michina
24 Heads embroidery michina yakakwira yekumhanya-mhanyisa thauro yekushongedza makompiyuta emuchina （13）
624 + 624 Computerised chenille stitch embroidery muchina
Yakakwenenzvera kwemaindasitiri cheni inokiya kushongedza michina yekusona
912 Servo mota yakachekwa makomboni
Zhejiang Zhaoshan Electrical Machinery Co, Ltd inogadzira michina yekushongedza yemakomputa, inova yepamusoro kambani yekambani yedunhu reZhejiang.
Nekunamatira manejimendi manejimendi ye ＂neepamusoro-tekinoroji semusoro, brand inosimudzira budiriro＂, isu takunda ISO9001-2015, ISO14001-2015 uye CE zvitupa.
Iyo inogona zvakare kunzi seyakarukwa ye3D, mushure mekushongedzwa kwakapetwa, inoda kutema chikamu chefuro rabha uye kubvisa pavo
Iyo inoshandisa mbichana dzakasiyana kuita embroider chimiro chakasiyana uye saizi yetambo.
Kurekodha kuruka ndiko kushandisa tambo yekushongedza zvishongedzo, tambo yakagadziriswa kana mutsetse zvinhu pakati kusvika kune jira
Coiling embroidery imhando yenzira yekushongedza iyo inoshandisa shinda yekushongedza kuputira tambo mukati, iyo inogona kugadzira mavara
Beads mudziyo wakagadzika padyo nemusoro wemuchina wakashongedzwa wekushongedza uyo unoshandisa mota kudzora yakasununguka girazi marozari, imwe neimwe.
Muchinjiko-kusona ndiyo inozivikanwa ruoko rwekushongedza ruoko, ikozvino inogona kushandiswa kuteedzera muchina, yakawedzera zvakanyanya kukosha kwakawedzerwa kwemuchina
Iyo inonzi zvakare yakashongedzwa yakashongedzwa ndiyo yakajairwa nzira yekushongedza. Iyo mhando yekushongedza ine dzakasiyana nzira dzetsono.
Ngowani uye jira rekushongedza muchina: zvinoenderana nemutengi kudiwa kwe readymade zvipfeko zvekushongedza, kapu yekushongedza uye yakashongedzwa
Nezvinodiwa zvezvigadzirwa zvakasiyana, nzira dzekushongedza chenille dzakabuda murukova rusingaperi.
Chain yakashongedzwa inozivikanwawo seketani yekumonera micheka Iyo yakaoma yekushongedza maitiro, ayo anoumba mana emakona ane flat
Matatu-emhando yekushongedza (3D) iko kushandiswa kwetambo yekushongedza kuEVA epurasitiki package mune matatu-mativi maitiro
Inodonongodza sequins ehukuru hwakaenzana kuti isunganidzwe pamwe chete voita tambo zvinhu, izvo zvinobva zvashongedzwa pamushini wakashongedzwa wakashongedzwa
Icho chinoreva kune yakasarudzika michina yemuchina iyo yakarongedzwa ne laser system pane embroidery muchina, iyo inonyatsobatanidza komputa
Coarse tambo embroidery
Mucheka wakashongedzwa unogadzirwa nekushandisa tambo yakasona yekushona seyakashongedzwa shinda. Inogona kugadzirwa neyakajairika yakashongedzwa michina
Yakavezwa kaburi embroidery
Iyo yakavezwa hove yakashongedzwa inowedzera yakasarudzika pateni kune yakashongedzwa embroidery. Chero bedzi iyo yekuveza gomba yekushongedza chishandiso ichiiswa pane yekutanga tsono ye
Mangani Mitauro mukomputa yako?
Totally 8 mitauro: Chinese, Chirungu, Spanish, Chiputukezi, Russian, French, Turkish, Arabic.
Kambani yako ine here waranti?
Hongu, isu tichapa 1 gore rekuchengetedza mahara mushini. Kana idzo dziri nyore-dzatsemuka dzakaputswa, iwe unogona kuichinja kubva kumatapuro edu mubhokisi rekushandisa, kana isina, tichakutumira kutsiva iwe neDHL expression.
Iwe ndiwe unogadzira here kana kambani yekutengesa?
Isu takagadzira tine ruzivo rwehunyanzvi pamushini wekumonera kupfuura makore 16.
Isu tichakupa iwe neruzivo rwechizvino-zvino uye zvigadzirwa zvehunyanzvi zveZhaoshan kekutanga.
Kambani yeZhaoshan yakaita musangano wekudzidzisa vashandi vehunyanzvi
Kuti uvandudze hunyanzvi hwebasa uye kuziva kwevashandi vekugadzira michina
Maodzanyemba China China Sewing Equipment Exhibition
Iyo kambani yakapinda mu2019 South China International Sewing Equipment Exhibition. Pane iyo nzvimbo yekuratidzira, nhamba huru yevatengi yakakwezvwa pano yekushanya.
Iyo ichangobva kugadzirwa ZSM yakakwira -mhanyisa chaiyo muchina
Iyo ichangobva kugadzirwa ZSM yakakwira -mhanyisa chaiyo muchina uyo uri kunyanya kuitira iyo nguo logo embroidery inoshanda.
Zhejiang Zhaoshan Magetsi Mashini Co, Ltd inogadzira michina yakashongedzwa emakombiyuta, inova iri yakakwira tekinoroji kambani yeZhejiang province .Kunotevedzera hunhu hwehungwaru hwe ＂nehupamhi hwepamusoro-soro semusoro, chinyorwa chinosimudzira budiriro development .....
Copyright © Zhejiang Zhaoshan Magetsi Mashini Co, Ltd Kodzero dzose dzakachengetedzwa.